Mma nke Rom, ọlaọcha na iko iko Rom
BGN Ọdụm Bulgarian
R $ Ezigbo Brazil
Ft Hungary gwakwara ya
Won Republic nke Korea
Ndị Rupe nke India
Site na $ Dollar dollar
S$ Dollar Singapore
TMT Ọchịchị Turkmen
UZS Uzbek obi
SEK Okpueze Sweden
₣ French franc
Jewelery si Israel
Ndị na-emepụta ọla
Ihe ọla Noa
Ọbụna ilegide anya zuru ezu iji mara na nke a bụ ihe pụrụ iche. Igwe Rom nke dị n'etiti etiti ahụ nwere ihe karịrị puku afọ abụọ ma chọta ya na Israel. Ndị a bụ foduru nke nkà nke Alaeze Ukwu Rom, bụ nke na-ahụ maka mmepe nke mbụ nke iko. N'ịbụ ndị mepụtara nkà na ụzụ ọhụrụ, dị ka iko, ndị Rom nwere ohere nke mmepụta ihe nke iko maka ma ụlọ e ji achọ na ụlọ nkwakọba ihe. Oge a bụ nanị otu ihe si na nchọpụta ọhụrụ nke Rom. Ọ bụrụ na ị kpebie itinye ya, ị ga-ebu otu akụkọ ihe mere eme.
Tụkwasị na nke ahụ, ị ​​ga-eyi ezigbo mpekere ndị mara mma. A na-eji ọlaọcha ọlaọcha kpuchie oghere ndị Rom na-egbuke egbuke n'etiti ya, nke nwere ụdị ọkaibe ma mara mma. Nke a ga-eme ka mgbakwunye gị mma.
Na-acha ọcha ma na-egosipụta Rom iko
Opal Gold na Diamonds, Hamsa aka Amara
Kọmpụta Rom na iko ọlaọcha
Iwu 14K Iwu Iri nke Mbido Idozi
270 677 rubles.
Nke a bụ ndepụta nke nche na ngwa si na ụlọ ahịa na Europe, USA, Singapore na Hong Kong
Nkwado maka 24 / 7
Iji nye ngwaahịa ị chọrọ, ị nwere ike iji ụdị ngwa ahụ
Ịbubata ngwaahịa na Russia naanị maka iji onwe gị na maka ego na-abụghị 7500 euro.
Ị na-azụta nanị n'ụlọ ahịa ụlọ ọrụ na gburugburu ụwa.
Ndepụta nke eserese na ngwa si mba dị iche iche nke ụwa na nnyefe gafee Russia na CIS.
Ịzụ ngwaahịa site na gburugburu ụwa site na ụlọ ọrụ na Hong Kong
© 2011-2019. Ntinye nke nche site na mba nile: Germany, Switzerland, Hong Kong, Singapore, Italy, USA + 7-966-158-75-08